Kedu ezumike 2020 kụziiri anyị gbasara atụmatụ azụmaahịa ekwentị na 2021 | Martech Zone
Ọ na-aga n'ekwughị, mana oge ezumike na afọ 2020 adịghị ka nke ọ bụla anyị nwetagoro dị ka okike. Site na mgbochi mmachi mmekọrịta mmadụ na-ejigide ya n'ụwa niile, omume ndị ahịa na-agbanwe site na usoro ọdịnala.
Maka ndị mgbasa ozi, nke a na-ewepụ anyị na usoro ọdịnala na nke si n'ụlọ (OOH), na-eduga na ịdabere na njikọ aka na mkpanaka. Na mgbakwunye na ịmalite na mbụ, ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya bilie na kaadị onyinye nyere a na-atụ anya ịgbatị oge ezumike nke ọma na 2021.
Ndị na-azụ ahịa abụghị naanị itinyekwu ego na kaadị onyinye (17.58%) afọ a, mana ịzụta kaadị onyinye ọtụtụ oge (+ 12.33% YoY).
Raftmepụta ozi ezumike na ịgba ume ịzụ ahịa site na ekwentị mkpanaaka na dijitalụ ga-abụ nkà dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ịmakụ ọtụtụ afọ na-abịa.
A na-agbapụta 70% nke kaadị onyinye n'ime ọnwa isii nke nzụta.
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi ekwentị na-emetụta akụkọ ihe mere eme, anyị ga-enwerịrị ihe ịma aka ndị pụrụ iche: ndị ahịa na-atụgharị ahịa na obere ntanye pụtara obere ala maka mgbasa ozi. Ọzọkwa, ikike maka ịpịgharị na ekwentị mkpanaaka pụtara na oge nlebara anya dị mkpụmkpụ karịa nke ọ bụla n'etiti oke osimiri nke mgbasa ozi yiri nke a.
Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mkpa idobe akara gị iche, ijide n’aka na izipu ozi na - ezipu ozi ziri ezi n’ụzọ dị nkenke, ịnọdụ ala nke ọma ndị nwere ike ịzụrụ gị, yana ịkwọ ụgbọala nke na - eduga na nsonaazụ achọrọ. Nzọụkwụ mbụ iji gosipụta mmetụ ahụ nke ndị na-azụ ahịa sitere na usoro okike n'azụ ahịa ngwaahịa gị.
Malite na Atụmatụ Egwuregwu na Ngwaọrụ Kwesịrị Ekwesị
Nzọụkwụ mbụ dị mkpa tupu ị dee otu okwu bụ ịghọta ogidi abụọ dị mkpa:
Onye ka ichoro iru?
Kedu edinam i choro ka ha buru?
Tupu ị gwupụta n’ime ozi na onyonyo, buru ụzọ laghachite ma chee echiche ihe ị na-achọ ime. Na-anwa ịmatakwu maka akara gị? You na-ewebata ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa? Na-anwa ịkwalite ahịa?
N'ebe a na-agagharị agagharị, ọ ga-abụ na ebumnuche ndị a niile agaghị ekwe omume, mana iji atụmatụ egwuregwu ziri ezi, ị nwere ike iwulite mkpọsa site na iji mbuli elu iji wuo njikọ aka na ebumnuche ndị a. Echiche a linear ga-enye gị ohere ịkwụsị mkpọtụ ahụ ma mepụta oge dị egwu.
Nwere Oke Ngwakọta Ngwaọrụ ịhọrọ
Ozugbo ị kọwapụtara usoro na ebumnuche doro anya, tụgharịa uche na ngwaọrụ. Enwere ngwaọrụ zuru oke iji nyere aka hụ na mmejuputa ihe okike gị na-aga nke ọma-ndị nwe ụlọ ahịa, ike mgbasa ozi bara ụba, vidiyo, ọdịnaya mmekọrịta ndị dịnụ, na ndị ọzọ.
Iji ngwakọta na dijitalụ, ịdabere na ngwaọrụ dijitalụ dị ka mmekọrịta na ịme egwuregwu na-aghọwanye ihe owuwu nke mkpọsa na-aga nke ọma ma na-enyere ụdị aka ịpụta. Agbanyeghị ngwugwu okike, itinye aka na ịkpọ oku iji rụọ ọrụ dị oke mkpa maka izipu ozi okike nke na-adabara ndị na-azụ ahịa ma n'ụzọ bara uru ma nwee mmetụta.
Tinye ọdịnaya Kaadị Onyinye ebe ọ dị mkpa
Nyere ngwa ngwa ịrị elu nke kaadị onyinye oge ezumike a, kwalite kaadị onyinye gị ma gbakwunye aro dị mkpa iji gbaa iji ya rụọ ọrụ. Nke a gụnyere njikọ enyemaka na izi ozi niile nke na-enye ndị ọrụ ohere ịlele nhazi ma nweta ndụmọdụ dị mkpa dabere na ịzụta gara aga ka ndị na-enweta kaadị onyinye nweta mmụọ sitere na ọnọdụ ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ omume omume omume zụrụ ahịa. .
Akụkọ Successga nke Ọma Iji Nwee Atụmatụ
N'ime oge ọ bụla siri ike maka ndị mgbasa ozi, e nwere ndị mmeri bu pụta ụwa; ụdị nke mebiri mkpọtụ ahụ na atụmatụ echebara echiche, itinye aka na okike, yana ngosi dị egwu. Ndị a bụ ụfọdụ mkpọsa jikọtara nke ọ bụla n'ime ihe ndị a iji mepụta atụmatụ mmeri:
Nnukwu Nza! - Nke a American ere ahịa kere a mkpọsa nke nyefere ozi kwa ụbọchị banyere onyinye na azụmahịa maka ndị ahịa. Ihe okike a jikọtara gallery nke ọdịnaya nwere ike ịnyagharị na okpokolo ọ bụla, na-egosipụta ihe ezumike pụrụ iche, nke eserese iji soro ndị na-azụ ahịa na-emekọrịta ihe. A ụlọ ahịa ugbu a oku na-aga (CTA) bọtịnụ wee duga ngwaahịa ịzụta ngwaahịa. Nke a bụ ihe ịga nke ọma nke ọma na njikọta nke ike mgbasa ozi bara ụba na ihe ọchị, ihe osise efu.
Ebe obibi Josh - were usoro ọdịnala dị iche iche maka mkpọsa ezumike ha, na-agbakwunye ihuenyo zuru oke, vidiyo dị elu. Ihe ọ ofụ wineụ mara mma nke mmanya a wụsara n'akụkụ ọkụ na-ebigbọ na -emepụta ngwa ahịa dị egwu maka ngwaahịa a, ma na-ewulite uru ngwaahịa a na-enweghị atụ na-enweghị ihe okike sitere n'aka onye na-ekiri ya. Na ọdịda peeji dị mfe na elegant, na-egosipụta abụọ nke elu vintages ha nwere njikọ ịzụta mmanya ugbu a.
STIHL - onye na-ebunye ngwa ọrụ ike na batrị jiri ezumike mkpọsa ezumike nke mmemme mmeghe gwụrụ na ngwugwu ngwugwu ha na isiokwu-agba na ike ha. Na ịpị CTA mere ka ndị ahịa nweta ahụmịhe swipeable, yana ọkụ ezumike gbagoro n'elu, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa site na azụmahịa atọ dị iche iche. Ntinye aka na-eduga ndị na-ekiri ihe na ngwaahịa na ngwaahịa ụlọ ahịa iji chọta ụlọ ahịa kacha nso na-ere ngwaahịa ha. Mgbasa ozi a rụrụ nnukwu ọrụ nke ijikọta animation mgbasa ozi bara ụba na mmekọrịta iji mepụta ngalaba na-akpali akpali nke na-eme ka amata ngwaahịa / azụmahịa, yana nnukwu ngwaọrụ maka ịchọta onye na-ere ahịa kacha nso.
Ga nke ọma ezumike a na karịa ga-achọ ụlọ ọrụ ka ha dozie mkpọsa mgbasa ozi ahaziri iche nke na-adọta ndị na-azụ ahịa site na mmekọrịta, ozi bara uru, na egwuregwu. Ma ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị iche, nke a bụ iji oge ezumike a mee ihe. Nọrọ ná nchebe!
Tags: nza buru ibundị ahịakpọọ ka emegamificationonyinye kaadị mgbapụtammefu kaadị onyinyekaadị onyinyeusoro ịzụ ahịa ezumikemmekọrịtajoshmgbasa ozi mgbasa oziOohn'èzípụọ na mgbasa ozi ụlọstihlomenala mgbasa ozi
WordPress: Embed MP3 Player na Blog Gị